Abaningi besifazane abangazange balinde isikhathi sokuya esikhathini bayazibuza - ingabe ukulibala noma ukukhulelwa? Iningi elinengqondo, ngokuqinisekile, lizoya kumjozi wesifo somzimba noma uthathe ukuhlolwa kokukhulelwa ekhaya, kodwa akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi.
< - - [uma gte mso 10] - ->
Zikhona yini ezinye izindlela zokuthola ukuthi ukhulelwe noma cha?
Izimpawu zabantu mayelana nokuqala kokukhulelwa
Okokuqala, kunezibonakaliso zokukhulelwa. Lokhu kuhlanganisa: owokuqala, lokhu kungukubambezeleka kokuya esikhathini, isifuba, ububele bezinsikazi zakhe nezinwele, ukwanda kombala, ukugula ekuseni, ukuhlanza, izinguquko zokunambitha, ukudonsa emanzini anosawoti noma omuncu, ukuguqula ukudla, ukukhathala nokucasula, ukuvuthwa okuvamile. Izimpawu ezinjalo azizona ezinembile kakhulu, ngokuvamile izimpawu ezinjalo ziyabonakala ngaphambi kokuya esikhathini. Ngaphezu kwalokho, iningi labesifazane mayelana nokukhulelwa okungenzeka liqala ukwethuka, kunomzwelo wokuzizwa yisisulu nezinye izimpawu ezihambisana nezimbangela zengqondo. Kodwa ukubambezeleka kokuya esikhathini kungase kungahlobene nokukhulelwa okungenzeka. Kunezinye izici eziningi ezingathinta ukuvuthwa, futhi kamuva ukubambezeleka kokuya esikhathini. Lokhu kufaka phakathi - ukucindezeleka, ukuhamba, izifo, imithi, ukuhamba, ukuvivinya umzimba, ukuguquka kwesimo sezulu kungazelelwe, ushintsho lwesisindo ngokungazelelwe, isibonelo, emva kokudla okude.
Ngokuqondile, indlela yokuthola ukuthi ukhulelwe noma cha ukukala ukushisa okuyisisekelo. Abesifazane abaningi basasebenzisa le ndlela evamile yokunquma ukukhulelwa. Ngalokhu udinga ukwazi umjikelezo wakho wokuya esikhathini bese ugcina ishadi lokushisa ngokucophelela. Ungaqiniseka ngokuqala kokukhulelwa uma umkhuhlane uhlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezintathu uma kuqhathaniswa nesigaba esivamile somzimba ophuzi - lesi sigaba sokuthunyuka kwesifuba kuze kube sekuqalile ukuhamba esikhathini esilandelayo, okubhekene namazinga aphezulu okushisa, kulesi sigaba izinga lokushisa lingaphezulu kwama-37 degrees. Uma isikhathi sesigaba sikuyizinsuku ezingu-12, futhi emjikelezweni othile usuyizinsuku ezingu-16, amathuba okukhulelwa aphezulu kakhulu. Kumele kuqashelwe ukuthi isigaba sokuqala, uma umjikelezo ungavamile, ungaba nobude obuhlukile, kanti isigaba somzimba ophuzi asinamathele futhi sihlala izinsuku eziyi-12-14. Kubalulekile ukuba ungaboni umjikelezo wonke, kodwa isigaba sesibili sesithuthuthu. Isikhathi sokujikeleza sihluka ngokuyinhloko ngenxa yesigaba sokuqala. Ukuphakama amathuba okukhulelwa lapho kuvela izinga lesithathu lokushisa okuphezulu lapho kunezigaba ezimbili emjikelezweni, kodwa lokhu akukwenzeki kubo bonke abesifazane, njengoba ishadi lokushisa labo bonke lihlukile. Uma kubonakala ngaphezulu kokushisa okungaphezu kwengu-18 ngokulandelana, lokhu kubonisa ukuthi ukukhulelwa kwenzeka.
Kukhona abesifazane abafunda ukuthi bakhulelwe, inyanga kuphela emva kokukhulelwe. Kodwa ukwazi izindlela ezilula zokuthola ukukhulelwa, lokhu kungafundiswa kakhulu. Izibonakaliso ezinkulu ezibonisa ukuthi kukhona ukukhulelwa - ukubambezeleka kokuya esikhathini, ukulala, umbala wezinguquko zezingono, isifuba esifubeni, i-toxicosis, isizungu, ukukhulelwa okuvela emkhathini. Amaphesenti angu-30 abesifazane ahamba nokuya esikhathini, naphezu kokukhulelwa, kodwa ukwabiwa akusiyo iningi futhi njalo. Ukubonakala kwezimpawu ezinjalo kuboniswa izinguquko ze-hormone emzimbeni.
Ezindlela ezithandwayo zokunquma ukukhulelwa ekhaya, singafaka izindlela zikagogo wethu, izindlela ezinjalo zikhona iminyaka engaphezu kwekhulu, ezinye zihlekisa noma azikho iqiniso, kodwa kunezindlela ezinengqondo kakhulu. Kunezindlela eziningi, kodwa cabangela ezinye zazo. Ngaphambi kwalokho okhokho bethu babilisa umchamo, uma owesifazane ekhulelwe, lokhu kuzoboniswa ukubonakala kwesidumbu emva kokubilisa. Owesifazane wayebhekwa njengesisu uma isisu saqala ukuqina. Ukwahlulelwa ngamaphupho: uma ubona inhlanzi ephilayo noma i-melon yamanzi ephusheni, khona-ke lona wesifazane "esimweni esithakazelisayo", uma i-perch noma i-crucian iphupha - ekuzalweni komfana, futhi uma i-pike noma i-herring, ifika ekuzalweni kwentombazane.
Indlela evamile kakhulu yokuthola ukukhulelwa ixuba umchamo nge-drop of iodine. Uma udonsa ihlumela le-iodine emcinini, kumele lichithe ngokuphelele - ngakho-ke, owesifazane ukhulelwe. Uma ingane ingalindeli ingane, ihlazo lizoba phezulu. Kuyafaneleka ukucabangela ukuthi le ndlela ayisebenzi, uma uhlola.
Indlela elula ayidingi lutho, kuphela umzimba wakho kuphela. Kubalulekile ukuba alale phansi futhi aphumule, ekude kwamamentimitha angu-7-8 ngaphansi kwenkabazi ukubeka izandla zakhe esiswini. Uma kwenzeka uzizwa ugijimi - ulinde ingane, ngaphandle kwalokho - awukhulelwe. Ayaziwa ukuthi le ndlela ilungile noma cha. Kukholelwa ukuthi uma owesifazane ekhulelwe, unesifo somkhuhlane, omama abanolwazi babiza inani eliqondile-kusuka ku-37 kuya ku-37.2 degrees. Ukukholelwa izibonakaliso zomuntu, incazelo yokukhulelwa kubonisa ukukhunjulwa okukhudlwana ebuhlotsheni obuseduze, obungakaze bubonwe ngaphambilini.
Ukukhulelwa kwakunqunywa kanjani ezikhathini zasendulo?
Udokotela nesazi sefilosofi sase-Ancient Greece Hippocrates wanxusa iziguli zakhe indlela enjalo yokunquma ukukhulelwa ngamakhambi abantu. Ngaphambi kokulala, udinga ukulungisa isisombululo sewayini nobusi futhi uphuze, noma udle ubuncane beju nge-anise. Uma owesifazane ephethe ubuhlungu esiswini esiswini ebusuku, lokhu kubonisa ukukhulelwa. Umlobi waseMiddleval, owayehlala e-Italy, wanikeza le ndlela yokuthola ukukhulelwa: owesifazane uveza umlilo, ungeza imure ngempepho futhi avuselele impepho. Uma owesifazane elindele umntwana, iphunga lempepho nemure lizobonakala kuye. Kunesinye iseluleko esivela ezincwadini zasendulo. Umchamo wasekuseni uthele emkhunjini futhi ku-1: 1 uthele iwayini kuwo. Mayelana nokukhulelwa kowesifazane kuzokutshela ukubonakala kwe-liquid.
Kunezibonakaliso zanamuhla zokukhulelwa, ezihlukaniswe ngabesifazane abakhulelwe.
Owesifazane okhulelwe uvame ukudonsa ukugula okusawoti, okugcizelele ukugula ekuseni, isifiso esiqhubekayo sokulala. Ukudla kwabesifazane kuyashintsha. Kungenzeka ukuthi uthandane nezitsha ezintsha futhi uyeke ukuthanda umkhuba. Njengoba ubona, ukukhulelwa kunganqunywa nje ngosizo lwesivivinyo, kodwa futhi nemithi yokwelapha.
Igciwane: ukwelashwa, ukuvimbela
Ukuphulukisa impahla ye-anyanisi obomvu
Izakhiwo eziwusizo ze-Licorice ne-Eleutherococcus amakhambi
Iklabishi elinesibhakabhaka ebusika ezimbizeni ezine-brine - elihlwabusayo kakhulu, elimnandi futhi elimnandi. Indlela yokuqoqa ukholifulawa ebusika ngokusho kokupheka nge-aspirin ngaphandle kokuzala inzalo
Ama-muffin nge-banana ne-chocolate chips
Iphayi elibabayo ne-rhubarb
I-Involtini kusuka ku-Isitshalo seqanda
Khetha ingane enhle nemfashini yokugqoka e-prom ensimini
I-Vampire makeup yeqembu elithandwayo